अब हामी ग्रीष्म inतुमा छौ, एप्पलले एप्पल वाचमा पानी प्रतिरोधको बारेमा के भन्छन्? | म म्याकबाट हुँ
अगाडि जानुहोस्, एप्पलले आफ्ना हातहरू सफा गर्न गइरहेको छ यदि तपाईंलाई तपाईंको एप्पल वाचको साथ समस्या छ र यो भिजेको छ। Cupertino कम्पनी को बाकी उपकरणहरु जस्तै, एप्पल को स्मार्ट घडी एक छ सेन्सर जसले उपकरणमा पानीको प्रविष्टि पत्ता लगाउँदछयदि यो उफ्रिन्छ भने, सम्भव "नि: शुल्क" मर्मतको बारेमा बिर्सनुहोस् यदि यस्तो घडीको वारेन्टी छ भने पनि।
यो एप्पलको लागि विशेष कुरा होईन, आफ्ना कम्पनीहरूले पानी प्रतिरोध थप्ने सबै फर्महरूले आफ्ना हातहरू धुनुहोस् यदि यसको समस्या छ र भित्र पानी पत्ता लगाइन्छ। त्यसोभए यो एप्पलको लागि विशेष कुरा होईन तर वास्तवमै हामीलाई चासो लाग्ने कुरामा केन्द्रित गर्न यसलाई अलग राखौं। के हामी एप्पल वाचलाई समुद्र तट, पोखरी, इत्यादिमा भिजेन सक्छौं?
व्यक्तिगत रूपमा, म सामान्यतया एप्पल वाचको प्रयोग गर्दैन जब म समुद्र तट वा पोखरीमा जान्छु, म स्नान गर्दिन, यद्यपि यो सत्य हो यदि तपाईं पोजिसनको साथ शारीरिक गतिविधि गर्नुहुन्छ र एकपटक मैले समाप्त गरेपछि म प्राय: पसिना सफा गर्छु। पानी यस अवस्थामा मलाई थाहा छ मसँग धेरै मानिसहरू छन् जो समुद्र, पौंडी पोखरी र अन्यमा यसलाई प्रयोग गर्छन्, त्यहाँ कुनै समस्या छैन र यसले समस्या बिना काम गरिरहन्छ।
के म पौडिदिन सक्छु वा एप्पल वाच अनको साथ स्नान गर्न सक्छु?
एप्पलबाट तिनीहरूको वेब खण्ड छ जसमा उनीहरू पानीमा एप्पल वाचको उपयोगको बारेमा विवरणहरू देखाउँदछन्। यस अवस्थामा उनीहरु एप्पल वाच सीरीज १ र एप्पल वाच (१ जेनेरेसन) मोडेल को कुरा गर्छन् जो पानी र स्प्लास को लागी प्रतिरोधी छन्, तर यो उनीहरुलाई डुबाउन को लागी सिफारिश गरीएको छैन। बाँकी मोडेलहरूको पानीमा पहिले नै प्रतिरोध क्षमता रहेको छ र श्रृंखला २ पछि फर्मले भन्छ कि तिनीहरू सतही जलीय गतिविधिहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जस्तै पोखरी वा समुद्रमा पौडी खेल्ने। यी घडीहरू स्पष्ट रूपमा डाइभिंग वा प्रभाव पानी जस्ता गतिविधिहरूको लागि बनाइएको छैन।
एप्पल बाट उनीहरु हामीलाई भन्छन् कि हामी यी घडीहरु संग एक शान्त नुहाउन सक्छौं तर कि उनीहरु साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, लोशन वा अत्तर को कुनै पनि प्रकार को उपयोग गर्न को लागी सिफारिश गर्दैनन्, किनकि उनीहरु हाइड्रोलिक सील र ध्वनिक झिल्ली लाई प्रभावित गर्न सक्छन्। एप्पल वाच सफा गर्दा यसलाई ताजा र न्यानो पानी प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ त्यसपछि यसलाई सूक्ष्म सूक्ष्म कपडाले सुकाउनुहोस् जस्तै माइक्रोफाइबर। सौना वा स्टीम कोठाहरूमा पनि घडी प्रयोग गर्न सिफारिस गरिदैन।
पानी प्रतिरोध एक स्थायी अवस्था छैन र यो समय संगै घटाउन सक्छ। पानी प्रतिरोध फिर्ता लिन एप्पल वाचलाई पुन: परीक्षण गर्न वा पुन: सील गर्न सकिदैन, यसको मतलब डिस्प्ले खोलेपछि यसले तरल पदार्थको प्रतिरोध गुमाउनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल उत्पादनहरू » Apple Watch » अब हामी ग्रीष्म inतुमा छौ, एप्पलले एप्पल वाचमा पानी प्रतिरोधको बारेमा के भन्छन्?
म्याक र आईप्याडको बिक्री यस बर्षको दोस्रो क्वाटरमा बढ्छ